ब्रतमा साबूदाना शाकाहारी कि मांसहारी? एक चोटी पढ्नै पर्ने - ज्ञानविज्ञान
महिलाहरुको लागि ब्रत भन्ने कुरा धेरै मान्यता मुलक हुन्छ। ब्रत बह्नेको एउटा आस्था र विश्वास हो । महिलाहरु ब्रतमा धेरै जसो फलफुल खाने गर्दछन तर व्रतमा हरेक घरमा साबूदाना खानु सामान्य हो । कयौं क्षेत्रमा यसलाई प्रसादको रुपमा पनि चढाइन्छ । तर तपाईले व्रत र धार्मिक कार्य गर्दा खाने साबूदाना शाकाहारी नभई मांसहारी भए ?
के गर्नुहुन्छ तपाईं ?
एकिन गर्नुहुन्छ ?तपाईंले व्रत वा धार्मिक कार्यमा खाने साबदाना मांसहारी हो । यदी तपाई विश्वास लाग्दैन भने यो लेख पुरै पढ्नुहोस् जहाँ हामीले साबूदाना बनाउने तरिका बताउने छौं त्यसपछि तपाईले सायद साबूदाना खान छोड्नुहुन्छ होला ।
व्रतको आहार सबुदाना ?
लड्डू, हलवा, खिचड़ी‘ आदि‘साबूदाना का विभिन्न व्यंजन बन्छन् । यसको उपयोग खास रुपमा व्रत उपवासमा गरिन्छ । फलको तुलनामा धेरै व्रतालु साबूदाना खान मन पराउछन् ।
तर तपाईं साबूदाना बनाउने प्रक्रियालाई जान्नु भयो भने तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्छ की साबूदाना साच्चैमा मांसाहारी हो या फेरि फलाहारी? शुरुआती रुपमा हेर्ने हो भने साबूदाना पूर्ण रुपमा प्राकृतिक वनस्पति हो । किनकी यो साग पाकमको एक रुखमा पाइने चोप बाट बनाइन्छ । तर बाजारमा पाइने साबूदाने के निर्माण को पूरै प्रक्रियाले गर्दा यो वानस्पतिक भएको भन्नु गलत हुनेछ । किनकी यसको निर्माण प्रक्रिया मा साबूदाना मांसाहारी बन्छ । खासमा साबूदाना तमिलनाडु को कयौं ठूला उद्योगमा बन्छन् । वास्तवमा तमिलनाडु मा ठूलो मात्रामा सागो पामको रुख पाइन्छ । त्यसकारण तमिलनाडुमा सवैभन्दा धेरै साबूदाना बन्छ ।
यसरी बन्छ साबूदाना
उद्योगहरुमा सागो पामको जरालाई जम्मा गरिन्छ । त्यसको चोपबाट साबूदाना बनाइन्छ ।
त्यस्तो चोपलाई महिनासम्म ठूला ठूला खाल्डोमा सडाइन्छ । खाल्डो ठूलो ठूलो र खुल्ला हुन्छ र माथिबाट प्रकाश दिइएको हुन्छ । प्रकाश भएका कारण किरा र जनावरसमेत खस्छन् । धेरै समय राखिने भएका कारण साबूदाना बनाइने सागो पामको चोपमा साना साना किरा पर्छन् । त्यहा फसेका जीव, किरालाई नहटाइ खाल्डोमा रहेको सागो पामलाई खुट्टाको सहायतमा मोल्ने काम गरिन्छ । यसरी मिचिएको सागो पाम ठूलो गुदको रुपमा तयार हुन्छ । जसलाई मेसिनमा राखेर साना साना दानामा तयार गरिन्छ ।
अब तपाईं नै सोच्नुहोस् यसरी बनेको सावूदानाले तपाई व्रत वा उपवासमा फलाहारको रुपमा प्रयोग गर्ने सावूदाना त्यही मरेका किरा,जीव मिसेर बन्छ के त्यो शाकाहारी हुन सक्छ ।
स्वाथ्यको सहयोग बाट ।
Topics #ब्रत #मांसहारी #शाकाहारी #साबूदाना
Don't Miss it थाहा पाउनुहोस, दिनमा कति पटक कफि पिउने ?
Up Next पुरुषको कपाल झर्नबाट बचाउन अपनाउनुस यी घरेलु उपाय